स्वास्थ्य मन्त्रीले मन्त्रालयमै चु’म्बन गरेको तस्वीर भाइरल, अब के हुन्छ ? — Sanchar Kendra
स्वास्थ्य मन्त्रीले मन्त्रालयमै चु’म्बन गरेको तस्वीर भाइरल, अब के हुन्छ ?
एजेन्सी। स्वास्थ्य मन्त्रीले चु’म्बन गरेको फोटा भाइरल भएको छ । लायतका स्वास्थ्यमन्त्रीले आफ्नै प्रेमिकासँग गरेको चु’म्बन भाइरल भएको हो ।त्यही चु’म्बनका कारण उनले राजीनामा दिएका छन् । कोराना महामारीको बेला आफ्नी प्रेमिकालाई चुम्बन गरेपछि बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्रीले राजीनामा दिनु परेको हो ।
सामाजिक दूरी पालना नगरेको भन्दै आलोचना भएपछि स्वास्थ्यमन्त्री म्याट ह्यानककले राजीनामा दिएका हुन ।उनले आफ्नी सहयोगी जीना कोलाडंगेलोलाई कार्यालयमा चु’म्बन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई राजीनामा लेख्दै हेनककले यो महामारीमा जति मानिसहरुले बलिदान दिएका छन, त्यो हेर्दा यदि हामी उनीहरुसँग केही गलत गर्छौं भने हाम्रो जिम्मेवारी नैतिकता देखाउनु हुन्छ ।
जीना पनि विवाहित हुन । यी दुबैले कार्यालयमा चु’म्बन गरिरहेको तस्वीर भाइरल भएपछि मानिसहरुले आलोचना सुरु गरेका थिए । उनले त्यसपछि माफी मागेका थिए ।
युवतीले किन गरिन् आफैंसँग बिहे ?
विवाह भन्ने बित्तिकै बेहुला र बेहुली अर्थात् दुईजना चाहिन्छ । एकल बाट युगल जोडी बन्नु नै वास्तवमा बिहे हो । तर अष्ट्रेलियामा भने एकजना युवतीले आफैंसँग बिहे गरेकी छिन् ।
पेट्रिसिया क्रिस्टिन नामकी ती युवतीले आफैंसँग बिहे गरेको घटना हाल निकै चर्चामा छ । आफ्नो स्वयं प्रतिज्ञालाई पूरा गर्दै क्रिस्टिनले आफैंसँग बिहे गरेकी बताइएको छ ।
सिड्नीमा बसोबास गर्दै आएकी क्रिस्टिन अहिले २८ वर्षकी भइन् । पेशाले शिक्षिका हुन् उनी । केही समय पहिले उनले बिहेका लागि इन्गेजमेन्ट गरिसकेको केटासँगको सम्बन्ध तोडिएको थियो । इन्गेजमेन्ट भैसकेर तय भैसकेको बिहे भंग हुँदा दुःख लाग्नु स्वभाविकै हो । तर क्रिस्टिनले भने त्यो शोकलाई शक्तिमा परिणत गरिन् । उनले भविष्यमा कसैसँग बिहे नै नगर्ने र आफैंसँग बिहे गर्ने फैसला गरिन् । भविष्यमा एक्लै आफैसँग जीवन बिताउने उनको निर्णय थियो ।
सोही बाचा पूरा गर्ने सिलसिलामा उनले हालै आफैंसँग बिहे गरेकी हुन् । आफ्नो बिहेका लागि उनले बिहेको कार्ड छपाएर साथीसँगी तथा आफन्तहरुलाई बाँडिन् । बिहेका लागि सुन्दर वेडिङ गाउन र एउटा हिराको औँठी खरिद गरिन् । बिहे समारोहमा आएका पाहुनाहरुका लागि भोजको व्यवस्था पनि गरेकी थिइन् ।
अनौठो त के भने उनले आफ्नो बिहेको कार्ड वितरण गर्नु अगाडिसम्म उनको बिहे आफैंसँग हो भन्ने कसैलाई थाहा रहेनछ । त्यसैले उनले दिएको बिहेको कार्डमा सबैले बेहुलाको नाम खोजे, तर त्यहाँ बेहुलाको नाम फेला नपरेपछि सबै अक्क न बक्क परे । क्रिस्टिनले त्यस विषयमा सबैलाई खुलस्त पारिन् ।
इन्गेजमेन्ट टुटेसँगै क्रिस्टिनलाई यो कुराको हेक्का भैसकेको थियो कि जीवनमा स्वयं प्रतिज्ञा हुनु निकै जरुरी हुन्छ । त्यस कारण उनले आफ्नो विवाहको थिम पनि यसै अवधारणामा राखेकी थिइन् । आफैंसँग बिहे गरेकी क्रिस्टिनले आफैंसँग प्रेम गर्ने तथा खुसी रहने बाचा पनि गरेकी छिन् ।
एमीका अनुसार पछिल्ला केही वर्षदेखि जब उनी जहाँ पनि जागिरका लागि अन्तर्वार्ता दिन जान्छिन् अन्तर्वार्ताकारहरु उनलाई घुरेर हेर्छन् । पुरुषहरु आफ्नो सुन्दरता र हटनेस देखेर नर्भस हुने गरेको उनको जिकिर छ । आफ्नो सुन्दरता करिअरका लागि सबैभन्दा ठूलो अड्चन बनेकोमा उनलाई दु:ख छ ।